Hitsidika an’i Makedonia Avaratra ny Papa François amin’ny volana Mey, fotoana fohy aorian’ny fifidianana filohampirenena · Global Voices teny Malagasy
Mihoatra noho ny dikany ara-pinoana ny endrika ara-politikan'ilay fitsidihana.
Voadika ny 28 Avrily 2019 21:29 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, русский, srpski, Français, Swahili, Italiano, English
Pikatsary avy tao amin'ny tranonkala papa.mk, nataon'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra ho an'ny fitsidihan'ny Papa amin'ny 7 Mey 2019.
Amin'ny Mey 2019, hitsidika an'i Makedonia Avaratra ny Papa François, roa andro fotsiny aorian'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filohampirenena.
Fotoana voalohany nisianà papa iray mitsidika an'i Makedonia Avaratra izany. Ampahana fitsidiham-paritra haharitra andro telo izay ahitana fiatoana any Bolgaria ihany koa ilay fitsidihana.
Nametraka tranonkala, papa.mk, ny governemantan'i Makedonia Avaratra mba hanamorana ilay fitsidihana. Mifanaraka tsara amin'ilay toetra maro kolontsaina ananan'ilay firenena, afaka jerena amin'ny teny telo ilay tranonkala: Makedoniana, Albaney ary Anglisy.
Nametra-panontaniana mikasika ny fananan'ny governemanta an'ilay tranonkala ny olom-pirenena sasany, milaza fa mifanohitra amin'ny toetra laïkan'ilay firenena izany.
Azon'ireo teratany Makedôniàna atao ny mangataka tapakila ho an'ilay Lamesa Masina, izay maimaim-poana, amin'ny alalan'ireo fiangonana any an-toerana, raha toa kosa ka afaka mamandrika ny toerany amin'ny alalan'ilay tranonkala ireo vahiny. Amin'ny 7 Mey ao amin'ny kianja lehibe ao amin'ny renivohitr'i Skopje no hatao ilay Lamesa.
Ambanin'ny iray isanjaton'ny mponina ao Makedonia Avaratra no katolika, izay 65 isanjatony eo no milaza fa mpanaraka ny finoana Kristiana Ortodoksa ary manodidina ny 33 isanjato ny finoana Silamo. Na kely aza izany toerana izany, tena isan-karazany ny vondrom-piarahamonina Katolika ao an-toerana satria ahitana ireo foko Makedoniana, Albaney, Kroaty, Slovenina, ary Poloney.
Etsy an-daniny kosa, manana dikany ara-pinoana ho an'ny finoana katolika ilay firenena satria ny renivohiny, Skopje, dia toerana nahaterahan'i Mère Teresa (1910-1997), izay nomem-boninahitra tamin'ny fomba ofisialy ho Masimbavy Terezy avy tany Calcutta. Iray tamin'ireo misiônera malaza indrindra tamin'ny taonjato faha-20 ary nahazo ny loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, teraka avy amin'ny fianakaviana avy amin'ny foko Albaney izay ny trano nipetrahany dia tena eo amin'ny toerana misy ny kianja lehibe ao an-tanàna ankehitriny.
Mihoatra noho ny dikany ara-pinoana ny endrika ara-politikan'ilay fitsidihana. Amin'ny maha-filoham-panjakana azy, tokony hihaonan'ny Ray Masia ny Praiminisitra sy ny Filoham-pirenena ho voafidy eo, izay ho tapitra dimy andro aorian'izay.
Toy ny marika fankasitrahana avy amin'ny Tandrefana sy fankaherezana ho an'ny governemanta ao anatin'ny ezaka ataony mba hampifanakaikezana ny firenena amin'ny fidirany ho ao anatn'ny OTAN sy ny Fiombonambe Eoropeana no fahitan'ny vahoaka Makedoniana ilay fitsidihana. Mibaribary ao anatin'ny bitsika iray avy amin'ilay jeneraly misotro ronono Stojanche Angelov izany fahatsapana izany, izay naneho hevitra mikasika ilay fitsidihana fanomànana ataon'ny sefon'ny Birao Makedoniana misahana ny Fiarovam-bahoaka ao Vatikàna.
Noho ny politika iraisam-pirenena hendry, mahery fo ary voafaritra ananan'ity governemanta ity, mandroso amin'ny dingana lehibe ity fanjakana kelintsika ity! Manomana ny ambaratongam-piarovana ambony indrindra ho an'ny herinandro fitsidihan'ny papa François ao Skopje ny Direkteran'ny PSB Sasho Tasevski.
Stevo [Pendarovski] ho an'ny filoha!
— Stojanche Angelov (@StojanceAngelov) 17 Aprily 2019
Iray volana mialohan'ny fitsidihan'ny Papa, nampiditra ny teny Makedoniana ho ao amin'ny rakitrany ny Vatican News, ny rafitra fampahalalambaovao ao amin'ny Vohitra Masina. Teny faha-34 azo jerena ao amin'ilay vaahadin-tserasera izany. Nilaza ny Eveka ao Skopje, i Kiro Stojanov, fa ”vokatra iray amin'ny fitsidihana apostolikan'ny papa François izany.”
Mialohan'ny Fitsidihana Apostolikan'ny #PapaFrançois Any #MakedoniaAvaratra amin'ny 7 Mey, manampy pejy iray natokana ho an'ny teny Makedoniana ny @VaticanNews. https://t.co/2obxroAMcx
— Vatican News (@VaticanNews) 8 Aprily 2019
Amin'ny volana Septambra, hitsidika an'i Mozambika, Madagasikara ary i Maorisy ny Papa. Notaterin'ny Global Voice ireo fanehoankevitra tao Mozambika nandritra ilay fitetezana.